नेपाल बैंकले माग्यो ३९६ कर्मचारी, कुन प्रदेशमा कति ? [सूचनासहित] -सेयर गरौ « Janaboli
नेपाल बैंकले माग्यो ३९६ कर्मचारी, कुन प्रदेशमा कति ? [सूचनासहित] -सेयर गरौ
काठमाडौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले सालतै प्रदेशमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। बैंकका अनुसार लोकसेवा आयोगको सहमति अनुसार २०७५्७६का लागि रिक्त दरबन्दी आह्वान गरेको जनाएको छ। बैंककाअनुसार सहायक प्रबन्धकमा खुला, महिलालगायत ७८ जनाको पद रिक्त रहेको जनाएको छ भने सहायक प्रबन्धक (आईटीमा) दुई जनाको दरखास्त आह्वान गरिएको छ । सहायक प्रबन्धकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने जनाइएको छ। बैंकले सहायक पदका लागि प्रदेश एकबाट ४१ जनाको दरखास्त आह्वान गरेको छ।
कनिष्ठ सहायक पदमा नौ जनाको माग छ। प्रदेश दुईमा ५१ जना सहायक र नौ जना कनिष्ठ सहायकको माग छ। प्रदेश ३ मा क्रमशः ५८ सहायक र १५ कनिष्ठ सहायक माग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ३४ सहायक र पाँच कनिष्ठ सहायकको माग छ। बैंकले प्रदेश पाँचमा ३४ सहायक र ५ कनिष्ठ सहायकमाग गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा २० सहायक र तीन कनिष्ठ सहायकको माग छ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि २० सहायक र तीन कनिष्ठ सहायक माग गरिएको छ। दरखास्त कार्तिक १६ गतेदेखि मंसिर ६ गतेसम्म दिन सकिने छ। त्यस्तै दरखास्त अनलाइमार्फत समेत दरखास्त दिन सकिने छ। अनलाइनबाट दरखास्त दिँदा आफूले चाहेको प्रदेश राख्न सकिने बैंकले जनाएको छ। परीक्षा सबै प्रदेशमा एकै मिति र समयमा सञ्चालन हुनेसमेत बैंकले जनाएको छ। सूचना तल अपलोड गरिएको छ । यो अवशर योग्यता पुगेका सबै इच्छुकसम्म पुर्याउन आफुले हेरिसकेपछि सेयर गरिदिनुहोला ।
यी हुन् राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रतिष्ठित पदमा जागिर निकाल्नेहरु [नामावलीसहित]
काठमाडौ । राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेडको रिक्त विभिन्न पदमा लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको
यी हुन् देशभरीका स्थानीय तहका लागि रोजगार संयोजकको जागिरमा छनोट भएकाहरु [नामावलीसहित]
काठमाडौं । प्रत्यक स्थानीय तहमा खटिने रोजगार संयोजकको लागि लिइएको परीक्षाको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशित भएको
नेपाल टेलिकमका लागि लिइएको विभिन्न पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]
काठमाडौं । सरकारी स्वामीत्व रहेको नेपाल टेलिकमले खुलाएको विभिन्न पदको विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित
यति धेरै संख्यामा करार सेवामा खुल्यो सरकारी जागिर
काठमाडौं । नेपालमा बढ्दै गइरहेको बेराजगारि समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नागरिक लगानी कोषले नयाँ कर्मचारी माग